Tababaraha Arsenal Ee Unai Emery Oo Afka Furtay Kana Hadlay Xiriirka Uu La Leeyahay Mesut Ozil – Kooxda.com
Tababaraha Arsenal Ee Unai Emery Oo Afka Furtay Kana Hadlay Xiriirka Uu La Leeyahay Mesut Ozil
Tababaraha Kooxda Arsenal ee Unai Emery ayaa Afka Furtay kana hadlay xiriirka uu la leeyahay xiddiga khadka dhexe ee kooxda Arsenal ee Mesut Ozil kadib markii ay soo bexeen warar badan oo sheegaya in uu khilaaf soo kala dhex galay.
Tababaraha reer Spain ayaa qirtay in uu mar walba Ozil cadaadis ku saaro si uu u hagaajiyo qaab ciyaareedkiisa ugana soo saaro qaab ciyaareedka ugu fiican isaga oo sidoo kale sheegay in ka fariisashadii uu ka fadhiistay xulka qaranka uu ka caawin doono arintaas.
Ozil ayaa kulanka Newcastle ee sabtida ciyaari doona kulankiisii ugu horeeyay ee shan sano kadib markii uu ku soo biiray kooxda Arsenal soona bandhigay qaab ciyaareed fiican.
InKasta oo uu Ozil Gunners ku soo biiray sanadkii 2013 hadana xiddiga ayaan waligii ciyaarin kulan ay Gunners ku ciyaarayso garoonka Kooxda Newcastle sababo la xidhiidha dhaawacyo iyo wax la mid ah.
Emery oo arintaas ka hadlaya ayaa yidhi” Xiddiguhu way la qabsadeen in ay ciyaaraan ciyaaraha caalamiga ah, waxa muhiim ah intaas kadib in ay diirada saaraan kooxohoooda, waxa muhiim ahayd Ozil in uu mar walba diirada saaro kooxdiisa kadib markii uu ka fadhiistay ciyaaraha caalamiga ah”.
“U Jeedkeena ayaa ah in aan xiddigeheena u diyaarino sida ugu fiican ee ay ku gaadhi lahaayeen qaab ciyaareedkooda ugu fiican waana arin muhiim ah, Ozil waxana uu u shaqaynayaa si fiican wuu fiican yahay, waxa aan arkaa in uu si buuxda diirada u saarayo qaab ciyaareedkiisa”.
Tababaraha reer Spain ayaa hadalkiisa ku soo xidhay” Ozil waxa uu raali ku yahay kuna qanacsan yahay booskiisa, badanaa waxa aan xiddigaha siiyaa boos ay qaab fiican ku soo bandhigayaan raaxana ku dareemayaan”.